အွန်လိုင်းအရောင်းဆိုင်: Banggood - Tenpigiau.lt
Banggood.com ဒါဟာအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စျေးနှုန်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းဦးဆောင်အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် - Banggood သင်ကအကောင်းဆုံးစာချုပ်အားငါပေးမည်! လစ်သူရန်ကုန်ပစ္စည်းများကယ်တင်တတ်၏။ ဒီဆိုင်၌သင်တို့ကိုရေဒီယိုထိန်းချုပ်မော်ဒယ်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ, တယ်လီဖုန်း, ကွန်ပျူတာများ, etc ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးတှေ့လိမျ့မညျ
Banggood.com အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စျေးနှုန်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးပမ်းတဲ့ဦးဆောင်အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစ » Banggood
အကောင်းဆုံး #2 Global Version အတွက်စျေး ၀ ယ်ပါ။ Xiaomi Amazfit GTR စမတ်နာရီမှအမေရိကန်ဒေါ်လာသာ 129.99 Tomtopအစာရှောင်ခြင်းအခမဲ့ရေကြောင်းမှာ .com ။ အထူးလျှော့စျေးများကသင့်ကိုစောင့်နေတယ် are
US $ 139.99 သာလျင်မြန်စွာအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးအနက်ရောင် KOSPET Optimus Pro 4G LTE စမတ်နာရီကိုရောင်းရန်ဝယ်ပါ။ Tomtop.com
EUR 134.99 အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လက်ကားစျေး၊ AMAZFIT GTS Smartwatch 1.65 လက်မ Retina Display 5ATM ရေစသော GPS ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗားရှင်း - Gloden
တည်ငြိမ်။ လုံခြုံသောပုံနှိပ်ခြင်း၊ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်မြန်သော Model ကိုဝေမျှခြင်းသင်၏ virtual world ကိုအဖြစ်မှန်သို့ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ဒီ CR-10 V2 3D ပရင်တာ Kit ကိုရွေးပါ၊ ၎င်းသည် CR-10 V2 3D ပရင်တာ၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးဘက်စုံသုံးလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အဆင့်မြှင့်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်တည်ငြိမ်။ တိကျမှန်ကန်သောပုံနှိပ်ခြင်း၊ သင်၏ ...
သင်၏စိတ်ကူးများကိုလွယ်လွယ်ကူကူအကောင်အထည်ဖော်ပါ။ ရိုးရာ 3D ပရင်တာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Anet ET4 သည်အချိန်ကုန်သောလက်ဖြင့်အဆင့်ညှိခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးသောဝါယာကြိုးကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း၊ ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုနှင့်တိကျမှုနည်းပါးခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ ၎င်းသည် modular installation ကိုလက်ခံပြီး 10 မိနစ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ပံ့ပိုးမှုလက်စွဲနှင့်အလိုအလျောက် ...
VIOMI V2 Pro ကို
သင်၏အိမ်တွင်းအကူအညီအထောက်အပံ့သည်မြေပြင်ပေါ်တွင်ဆံပင်များများနေသလား။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အရမ်းအလုပ်များနေလား VIOMI V2 Pro သည်အလုပ်ရှုပ်နေသည့်အိမ်မှုကိစ္စများကိုကူညီရန်အဘယ်ကြောင့်ခွင့်မပြုပါသနည်း။ သင့်မိသားစုနှင့်အတူနေရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရန်အချိန်ပိုမိုရရှိလိမ့်မည်။21 Sweep and Mop တွင်သင်သည်ကြမ်းပြင်ကိုလှည်းရုံတင်မကသင့်အရောင်ကိုလည်းအရောင်တင်ပေးနိုင်သည်။
Xiaomi က Redmi 8 Pro ကိုမှတ်ချက်
EUR 235.99 အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လက်ကားစျေး၊ Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6.53 လက်မ 4G LTE စမတ်ဖုန်း MTK Helio G90T 6GB 64GB 64.0MP + 8.0MP + 2.0MP Quad နောက်ကင်မရာများလက်ဗွေအိုင် X Dual SIM MIU
EUR 171.99 အခမဲ့တင်ပို့၊ လက်ကားစျေး၊ Xiaomi Redmi မှတ်ချက် 8 6.3 လက်မ 4G LTE စမတ်ဖုန်း Snapdragon 665 4GB 64GB 48.0MP + 8.0MP + 2.0MP Quad နောက်ကင်မရာလက်ဗွေ ID အိုင်ဒီ dual SIM ဆင်းမ်ား Android 2.0
CUBOT X20 Pro ကို
True AI၊ True Triple CameraCUBOT X20 Pro သည်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင့်အားရှင်းလင်းပြီးကြည်လင်ပြတ်သားသောအမြင်အာရုံကိုရရှိစေသည့် 6.3 လက်မရေရေမျက်နှာပြင်ပါရှိသည်။ 4MP ကင်မရာများ၊ 12.0MP + 20.0MP + 8.0MP နောက်ဘက်ကင်မရာနှင့် 13.0MP selfie ကင်မရာတပ်ဆင်ထားပါကသင်သည် 1080 x 2340 resolution မြင့်မားသောပုံရိပ်များကိုခံစားနိုင်သည်။ 6GB RAM + ...
Xiaomi က Mi A3
EUR 171.99 အခမဲ့တင်ပို့၊ လက်ကားစျေး၊ Xiaomi Mi A3 6.088 လက်မ HD + မျက်နှာပြင် 4G LTE စမတ်ဖုန်း Snapdragon 665 4GB 64GB 48.0MP + 8.0MP + နောက်ကင်မရာသုံးခု Android One Global Version - အဖြူရောင်
7 Pro ကို OnePlus
EUR 629.99 အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လက်ကားစျေးနှုန်း၊ OnePlus7Pro Pop-up ကင်မရာ 6.67 လက်မ 4G LTE စမတ်ဖုန်း Snapdragon 855 8GB 256GB 48.0MP + 8.0MP + သုံးဆနောက်ဘက်ကင်မရာများ Android 16.0 In-Display လက်ဗွေအချက်ပြ NFC Fast Charge
ထိပ်ဖျား: တစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးရန်သော့ဖွင့်ထားသည်။ သင်၏ဒေသnetworkရိယာကွန်ယက်နှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင်သေချာအောင်ပေးပါ။ သင်၏တိုင်းပြည်ကွန်ယက်နှုန်းအတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ ဤပစ္စည်းကိုမ ၀ ယ်ခင်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပံ့ပိုးသူနှင့်စစ်ဆေးပါ။ ဖော်ပြချက် - OnePlus7သည် Phablet Features တစ်ခုအနေဖြင့် 6.41 လက်မမျက်နှာပြင်သည်သင့်အားထူးခြား။ ကွဲပြားခြားနားသည်။
Xiaomi က Mi 9T Pro ကို
EUR 359.99 အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လက်ကားစျေး၊ Xiaomi Mi 9T Pro 6.39 လက်မ 4G LTE စမတ်ဖုန်း Snapdragon 855 6GB 64GB 48.0MP + 8.0MP + 13.0MP သုံးဆနောက်ဘက်ကင်မရာ MIUI 10 In-Display လက်ဗွေ - မြန်မြန်အားသွင်း - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗားရှင်း
Xiaomi က Mi 9T
ထိပ်ဖျား: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုရန်သော့ဖွင့်ထားသည်။ သင်၏ဒေသnetworkရိယာကွန်ယက်နှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင်သေချာအောင်ပေးပါ။ သင့်နိုင်ငံ၏ကွန်ယက်အကြိမ်ရေကိုဒီမှာနှိပ်ပါ။ ဤပစ္စည်းကိုမ ၀ ယ်ခင်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပံ့ပိုးသူနှင့်စစ်ဆေးပါ။ ဖော်ပြချက် - Xiaomi Mi 9T သည် Phablet Features များအနေဖြင့် 6.39 လက်မမျက်နှာပြင်သည်သင့်အားတမူထူးခြား။ ကွဲပြားခြားနားသည်။
7 Pro ကိုစမတ်ဖုန်း OnePlus
ထိပ်ဖျား: Worldwide ၏အသုံးပြုမှုအတွက်သော့ခတ်မ။ local area network သဟဇာတဖြစ်užtikrintiပေးပါ။ သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကြိမ်နှုန်းကွန်ယက်များအတွက်ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒီ item.Description purchasing ရှေ့၌သင်တို့လေယာဉ်တင်သင်္ဘော / ပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ: OnePlus7Pro ကိုတစ်ဦး Phablet ကို 6.67 လက်မ display ကိုသင်တစ်ဦးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမတတ်နိုင် features အဖြစ် ...
ကင်မရာနှင့်အတူ JJRC X9 GPS စနစ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် 1080P
အမေရိကန်ဒေါ်လာ 169.99 အခမဲ့သင်္ဘောတင်ခ, လက်ကားဈေးနှုန်း, JJRC X9 Heron 1080P 5G Wi-Fi နှင့် GPS FPV Brushless RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် Optical Flow နေရာချထား RTF - က Black
JJRC H8 Mini-မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ
ဖော်ပြချက်: JJRC H8 mini ကို RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် H36 အဖြစ်ရေပန်းစားသည်။ စွန်ပလွံအရွယ် UAVs အေးမြကြည့်ပေမယ့်လည်းသင်သွားရာ၌သင်တို့ကိုအေးမြ play လုပ်ခွင့်ပြုမသာ။ အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပန်ကာအစောင့်ဖြင့်ကာကွယ်ထားပါကမိုးလုံလေလုံ flight.Flying H8 ဒါလွယ်ကူသည်များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သငျသညျညှနျကွားခ၏ကြားမှအတွက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှနိုင်ပါတယ် ...
hubs သိ GPS စနစ် FPV မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်
Headless အလိုလို Orientation- အလိုအလျောက်ပြန်သွားမူလစာမျက်နှာ Failsafe- အလိုအလျောက်ကိုယူ-ချွတ်နှင့် Landing- 3-ဝင်ရိုးမော်ဒယ်အခါ device- FPV အွန်လိုင်း broadcast- အတွက်အဓိက Features- GPS စနစ် interest- မြင့် Hold Mode ကို၏ points- Orbital ပေးထား point ရဲ့ me- အမှတ် circumnavigation Follow 4k ကင်မရာတပ်ဆင်ထားတည်ငြိမ် ...
Lenovo က Z6 Lite ကိုစမတ်ဖုန်း
ထိပ်ဖျား: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သော့ခတ်မ။ local area network သဟဇာတဖြစ်užtikrintiပေးပါ။ သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကွန်ယက်ကိုအကြိမ်ရေအတွက်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။ လက်မ display ကိုသင်တစ်ဦးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမတတ်နိုင်6တစ် Phablet ကို features တွေအတိုင်းဤ item.Description Lenovo က Z6.3 Lite ကိုဝယ်ယူရှေ့၌သင်တို့လေယာဉ်တင်သင်္ဘော / ပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ ...
Huawei P30 Lite စမတ်ဖုန်း
ထိပ်ဖျား: Worldwide ၏အသုံးပြုမှုအတွက်သော့ခတ်မ။ local area network သဟဇာတဖြစ်užtikrintiပေးပါ။ သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကြိမ်နှုန်းကွန်ယက်များအတွက်ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒီ item.Main အင်္ဂါရပ်များဝယ်ယူရှေ့၌သင်တို့လေယာဉ်တင်သင်္ဘော / ပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ: Huawei P30 Lite ကို 4G phablet eCPA 6.15 9.0.1 လက်မ (က Android 9.0) Kirin 710 6GB RAM ကို ...
ASUS က Zenfone6စမတ်ဖုန်း
ASUS က Zenfone စစ်မှန်သော Full-screen ဖုန်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 6.4 လက်မ screen ကိုမဆိုထစ်ခြင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်လာကြတယ်-ပေါက်တွေကျဉ်းမြောင်းဘောင်နှင့်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်၏ကန့်သတ်တွန်း, အောင်မြင်မှု 92% မျက်နှာပြင်-to-ခန္ဓာကိုယ်ရိက္ခာ။ Flip ကင်မရာကိုရှေ့ဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်း, 48MP + 13MP dual-မှန်ဘီလူးရှိပါတယ်နောက်ဘက်ကင်မရာနှင့်ရှေ့ကင်မရာများ၏နယ်နိမိတ်ချိုး ....
UMIDIGI A5 PRO စမတ်ဖုန်း
ထိပ်ဖျား: Worldwide ၏အသုံးပြုမှုအတွက်သော့ခတ်မ။ local area network သဟဇာတဖြစ်užtikrintiပေးပါ။ သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကြိမ်နှုန်းကွန်ယက်များအတွက်ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒီ item.Main purchasing ရှေ့၌သင်တို့လေယာဉ်တင်သင်္ဘော / ပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ Features: UMIDIGI A5 PRO 4G လက်မကို Android phablet 6.3 9.0 Helio P23 ARM Mali G71 MP2 700MHz 4GB ...
UMIDIGI F1 စမတ်ဖုန်း
ထိပ်ဖျား: Worldwide ၏အသုံးပြုမှုအတွက်သော့ခတ်မ။ local area network သဟဇာတဖြစ်užtikrintiပေးပါ။ သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကြိမ်နှုန်းကွန်ယက်များအတွက်ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒီ item.There purchasing UMIDIGI F2 ၏ 1 ဗားရှင်းမီဒါတဦးတည်းရဲ့အဆိုအရသက်ဆိုင်ရာတဦးတည်းဝယ်ယူပါကသင်၏လေယာဉ်တင်သင်္ဘော / ပံ့ပိုးပေးနှင့်အတူစစ်ဆေးပါ ...
đi RoboMaster S1 စက်ရုပ်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ 549.99, လက်ကားဈေးနှုန်း, đi RoboMaster S1 DIY 4WD FPV RC စက်ရုပ် Intelligent Sensing Scratch ချပ်ဝတ်တန်ဆာ Python ကိုကလေးများလက်ဆောင်ပေးမယ်များအတွက် Coding
Xiaomi က Redmi AirDots ဘလူးတုသ်နားကြပ်
ကင်မရာနှင့်အတူ JJRC JJPRO X5 GPS စနစ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် 1080P
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: ● 5G Wi-Fi ပိုမိုမြန်ဆန်ဘို့စနစ်နှင့်ရှင်းလင်းဓာတ်ပုံများ●နိမ့်ဆူညံသံချောမွေ့ပြေးဘို့ Brushless မော်တာများနှင့်ထပ်မံထိပ်တန်းအကွာအဝေး●မြင့် Hold positioning ကိုစနစ်ကတစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အခါရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝ● GPS စနစ် positioning ကိုစနစ်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်မှအပြည့်အဝထိန်းချုပ်užtikrinti စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတည်ငြိမ်မှု●ပွိုင့် ...
ကော့ဒလက်လေဟာနယ်သန့်စင် Xiaomi က Mijia
ဖော်ပြချက်: အဆိုပါ Mijia ကြိုးမဲ့ Handheld ဖုန်စုပ်စက်အကြီးစားစုတ်ယူခြင်းအင်အား 9AW ပေးနိုငျဘယ်တစ်ဦး 100,000-rpm ပါမြန်နှုန်းမြင့် brushless DC ကအင်ဗာတာမော်တာ, built-in တစ်ခု 100-ကန်တော့ချွန်ဆိုင်ကလုန်းလေဆင်နှာမောင်းဒီဇိုင်း်ပေးရန်။ အဆိုပါ 5-ဇာတ်စင် filter ကိုစနစ်ကအလယ်တန်းညစ်ညမ်းမှုအောင်ကာကွယ်နိုင်မြေမှုန့် 99.97% သော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ခုနှစ်တွင် ...
Xiaomi က Redmi5(3GB RAM ကို 32GB ROM ကို 5.99 လက်မ) မှတ်ချက်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ 132.99 အခမဲ့သင်္ဘောတင်ခ, လက်ကားဈေးနှုန်း, Xiaomi က Redmi55.99 636 လက်မစမတ်ဖုန်းတွင် Snapdragon 3GB 32GB 5.0MP 12.0MP + Dual-ကင်မရာများကိုနောက် MIUI OS ကို918 မှတ်ချက်:9အပြည့်အဝကို Global ဗားရှင်း Screen - က Black
Banggood.com အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စျေးနှုန်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးပမ်းတဲ့ဦးဆောင်အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည် - Banggood သင်ကအကောင်းဆုံးစာချုပ်အားငါပေးမည်! ဒီဆိုင်၌သင်တို့ကိုရေဒီယိုထိန်းချုပ်မော်ဒယ်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းများ, တယ်လီဖုန်း, ကွန်ပျူတာများ, etc ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးတှေ့လိမျ့မညျ